သင်သည်လေ့လာမှုပုံစံ ၃ ခုကိုကျွေးမွေးနေသလား။ | Martech Zone
သင်သည်လေ့လာမှုပုံစံ ၃ ခုကိုကျွေးမွေးပါသလား။
သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 18, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဆိုဒ်များ၊ အီးမေးလ်များနှင့်ဘလော့ဂ်များသည်သဘာဝအားဖြင့်အမြင်အာရုံရှိပြီးအသုံးပြုသူနှင့်ပင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ... သင်မြင်နိုင်သည် (အမြင်အာရုံ) နှင့်သင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများ (kinesthetic) ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အပါအဝင်အဘယျသို့က်ဘ်ဆိုက်များအပါအဝင် Martech Zoneအစာမစားနိုင်၊ နားထောင်သူသို့သျော။
သင်ယူမှု၏3စတိုင်များ
မြင်သာသော - သင်ယူသူအများစုသည်အမြင်အာရုံရှိသည်။ သူတို့ဟာဖတ်ချင်တယ်၊ အထူးသဖြင့်ဒီအကြောင်းအရာကိုဇယားများနှင့်ရုပ်ပုံများကထောက်ခံတဲ့အခါလေ့လာရတယ်။
အာရုံ - လူ ဦး ရေရဲ့တစိတ်တပိုင်းကတော့ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရုံဖြင့်သင်ယူလို့မရဘူး။ သူတို့တကယ်လိုအပ်သည် ကြား အဲဒါကိုနားလည်ရန်သတင်းအချက်အလက်။ အသံနှင့် inflection ၏အသံအလွန်အရေးကြီးလှသည်။
ကွမ်းခြံကုန်း - အချို့လူများသည်စာဖတ်ခြင်း၊ ကြားခြင်းမှသင်ယူခြင်းမရှိပါ။ အပြန်အလှန်လေ့လာခြင်းမှသင်ယူကြသည်။ ဘလော့ဂ်တစ်ခုသည်ဤဆက်သွယ်မှုမျိုးကိုခွင့်ပြုသော်လည်းစစ်တမ်းများ၊ မေးခွန်းလွှာများ၊ ဆလိုက်ရှိုးများနှင့်အခြား application များမှတဆင့်ထပ်မံအားဖြည့်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်သင်၏အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည်အလွန်အရေးကြီးသည် အစာ သင်ယူမှု၏ဤသုံးခုစတိုင်များ။ အကြောင်းအရာကိုထပ်ခါတလဲလဲနားထောင်ခြင်းသင်ယူသူကိုကျွေးမွေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ - ၎င်းတို့သည်အကြောင်းအရာကိုအပြည့်အဝနားလည်နိုင်ရန်၎င်းတို့အားနားထောင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်ပေးရမည်။ ထို့ကြောင့် ၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိချိုင့်ခွက်များသို့ ၀ င်ရောက်သောစာမျက်နှာများစွာတွင်ဗီဒီယို၊ စာသားနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများပါ ၀ င်သည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်လှမ်းမမီမှုကိုတိုးချဲ့ခဲ့တယ် Martech Zone ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတဆင့် ရေဒီယိုရှိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Youtube ဗီဒီယိုများကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိုဘိုင်း applications များ, ငါတို့ infographics.
ကျော်ကြားမှုထောက်ခံချက် Tweets ဒီမှာ!
18:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 6, 44 မှာ
Doug - ကြောက်မက်ဘွယ်သော post ကို။ ငါ Teaching Sells သင်တန်းကိုစခဲ့တာပါ။ ဘရိုင်ယန်ကလာ့ခ်ကဒီခေါင်းစဉ်ကိုသေချာပေါက်တူးဖော်ခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်အသံ podcasts များမှတဆင့်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သော်လည်းယခုသင်ဗီဒီယိုကိုရိုက်ပြီးသင်အကြံပြုသည့်အတိုင်းခွဲထုတ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူအတွက်အကျိုးရှိရုံသာမကသင့်တွင်ရောင်းနိုင်သောအလားအလာရှိသောထုတ်ကုန်နှစ်ခုရှိသည်။
18:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 11, 24 မှာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Jason! ငါအခုသုံးနေတဲ့ရောင်းဝယ်မှုနည်းပြသင်တန်းမှတဆင့်သင်ယူခြင်းပုံစံ ၃ မျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။